ဤစာကိုဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စစ်ဆေးပါ
သင်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ သိချင်ပါသလား။ အမှန်ကန်ဆုံး စစ်ဆေးနည်းဖြင့် စစ်ဆေးကြည့်၍ရပါသည်။ အောက်ပါ မေးခွန်းများကို ဖြေကြည့်ပြီး ရမှတ်များကို ပေါင်းကြည့်ပါ။ သင်ဘယ်လို လူစားမျိုးလည်း ဆိုတာ အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မည်။
၁။ သင်က စိတ်ကောင်းရှိသူလား…..
၂။ သင်က ဥာဏ်ကောင်းပြီး ထက်မြက်သူလား……..
၃။ သင်က ရုပ်ချောသူလား…..
ကဲ…. ရမှတ်ကိုပေါင်းကြည့်ပါ။ သုံးမှတ်ပဲရသည်ဆိုပါက သင်သည် စိတ်လည်းပုပ် ၊ ရုပ်လည်းဆိုးသည့် ငထုံငထိုင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုသာ မှတ်ပေတော့။
ဖေဖော်ဝါရီ - ၁၃
လှိုက်စားဆို့နင့် အသံများ၊ ဝေးကွာခြင်းသီချင်းများ၊
ဒီကမ္ဘာရဲ့အမှုန်အမွှားတစ်ကောင်ရင်မှာ ကမ္ဘာနဲ့မဆန့်တဲ့အလွမ်းတွေ မီးလိုထတောက်တယ်။
အလင်းဟာ တဖြည်းဖြည်းတိုက်စားခံရ….. လောကကိုဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရ…
နတ်ဆိုးတို့ကျက်စားရာ ဖုန်းဆိုးမြေရိုင်းမှာ ကိုယ့်သေတမ်းစာတစ်စောင်မွေးဖွား
အခုညနေက မိုးစုန်းစုန်းချုပ်သလိုဒဏ်ရာတွေနဲ့……………………..။ ။
ဖြာ ဆင်း လင်း လွင်ပေးပါ မိသံစဉ်။
ကိုယ့်ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းပြတင်းကို ဆွဲဖွင့်
မင့်အတွက် အိပ်စက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါရစေ မိသံစဉ်။
ပြန့် ကျဲ ဝေ သီ… တဖွဲဖွဲနှင်းတွေ ပြန့်ကျဲဝေသီ
တစတစ တိုး ၀င် နင်း ဖြတ်
ကြယ်တွေ…ကြယ်တွေ… တဖျတ်ဖျတ်တမှုန်မှုန် လင်းလာကြတာပါလား။
ကိုယ့်ရင်ထဲက ကြယ်တွေလေ…. တဖျတ်ဖျတ်လင်းလာကြတာပါကွယ်။
တစ်ဘ၀လုံးစာ…….. တဖွဲဖွဲ နှင်းတွေ…….။
အချိန်က ညနေ ငါးနာရီခန့် ရှိပြီ။ တစ်နေကုန် ပေးထားသော အပူငွေ့နှင့် အလင်းအားကို နေမင်းက တဖြည်းဖြည်း နှုတ်သိမ်းစ ပြုနေ၏။ တစ်နေ့တာလုံး၏ အလှဆုံးအချိန် ဟုပင် ပြော၍ ရလောက်အောင် အားပျော့ နေပြီ ဖြစ်သော နေရောင်ခြည်က ဖျော့ဖျော့လျော့လျော့ လေးသာ ကမ္ဘာမြေပေါ် ကျရောက်နေသည်။ လမ်းထဲ မှာတော့ အရောင် အသွေးစုံ၊ အသက်အရွယ်စုံ ကလေးများ ဆော့ကစား နေကြသလို တစ်နေ့တာ အလုပ်ခွင်မှ ပြန်လာသူများ၊ မိမိ အိမ်ရှေ့တွင် အသီးသီး ထွက်ထိုင်ရင်း ညနေဆည်းဆာကို ခံစားကြသူ များနှင့် ခါတိုင်း လိုပင် စည်ကား နေ၏။
ထိုအချိန်မှာပင် ကလေးများ ထံမှ “ဟေး”ခနဲ အော်လိုက်သံကို ကြားရသည်။ ရှိသမျှ ကလေးများ အကုန်လုံး ဆော့ကစား နေရာမှ ရပ်တန့်ပြီး လမ်းအ၀င်ဝ ဘက်ကို ပြေးသွား ကြသည်။ လမ်းထဲရှိ လူများ ကတော့ မြင်နေကျ မြင်ကွင်းမို့ မအံ့သြကြ။ ရောင်စုံမီးလုံးများ သွယ်တန်း ထားပြီး ပတ်ပတ်လည်မှာ “လမင်းဝေဖာ ရေခဲမုန့်” ဟု ဆေးရောင်စုံ ရေးထားသော ကားတစ်စင်း လမ်းထဲကို ၀င်လာခြင်း ဖြစ်၏။ ထိုကားက လမ်းထဲသို့ လေးရက် တစ်ခါလောက် လာနေကျ။ ထိုကား လာတိုင်းလည်း လမ်းထဲ ရှိရှိသမျှ ကလေးများ အကုန် ပြေးလိုက်နေကျ ဖြစ်သည်။
“ကလေးတွေ လာကြ .. စားကြနော် .. ခဏချင်းမှာ လမင်းဝေဖာက ကုန်တော့မှာ …. ဝေဖာ ရေခဲမုန့်တွေ .. တစ်ခုမှ ငါးဆယ်တည်း … အလှစားရင်တန်အောင်ကောင်း … အ၀စားရင်တော့ မကျန်အောင် ရောင်းပေးမယ့် လမင်းဝေဖာ တွေပါ”
ကားပေါ်မှ ရောင်းသူက ထိုသို့ ဝေေ၀ဆာဆာ အော်လိုက် သည်နှင့် ကလေးများ ကလည်း ထိုကားနား တွင်သာ ၀ိုင်းအုံနေ ကြတော့သည်။ ကလေးများ ဖြစ်နေကြ တော့လည်း ၀ယ်စား နိုင်သည် ဖြစ်စေ၊ ၀ယ်မစား နိုင်သည်ဖြစ်စေ ထိုကား ပြန်မထွက်မချင်း တ၀ဲလည်လည် ဖြစ်နေကြ၏။ ခဏနေတော့ ဖိုးအောင်၏ စူးစူးဝါးဝါး ငိုသံနှင့်အတူ ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်းသော ကြိမ်းမောင်းသံများ ထွက်ပေါ် လာသည်။ ထုံးစံအတိုင်း ဖိုးအောင် အရိုက်ခံရ ပြန်ပြီပေါ့။ ကျွန်တော် နေထိုင်သော လမ်းကလေး၏ စရိုက် သဘာဝကို သေချာ စဉ်းစားနေ မိပြန်သည်။
ကျွန်တော် နေထိုင်သော လမ်းကလေးက လူတန်းစား စုံသည်။ လူနေမှု အဆင့်အတန်း မညီမျှ ဟုလည်း ပြော၍ ရသည်။ ကျွန်တော့် အိမ်၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ဆရာဝန်ကြီးအိမ်။ ဒေါက်တာ မြင့်မောင်နှင့် ဒေါ်ထားထားဟု ဆိုလျှင် တစ်လမ်းလုံး သိကြသည်။ လင်မယား နှစ်ယောက်လုံး ရုပ်ရည် သန့်ပြန့်ပြီး စိတ်သဘောထားလည်း ကောင်းကြသည်။ သူတို့၏ သားလေး မျိုးဇော် ကလည်း တစ်လမ်းလုံး၏ အချစ်တော်။
သူတို့ ဘေးက အိမ်မှာတော့ ပွဲစား ကိုခင်တင့် နေသည်။ လူပျိုကြီး ဖြစ်ပြီး သူ့အလုပ် သဘာဝနှင့် မညီမျှစွာ ခပ်အေးအေးပင် နေတတ်သူ ဖြစ်၏။ ကျွန်တော့် ဘေးအိမ် ကတော့ ဖိုးအောင်တို့ မိသားစု နေသော အိမ်ဖြစ်သည်။ တစ်လမ်းလုံးမှာ အနွမ်းပါးဆုံး မိသားစုဟု ပြော၍ရသလို တစ်လမ်းလုံးတွင် ပူညံပူညံ အဖြစ်ဆုံး အိမ်ဟုလဲ ပြော၍ ရသည်။ ဖိုးအောင်၏ အဖေ လွင်မောင်က ဆိုက်ကား နင်းသည်။ ညနေစောင်း လောက်ဆိုလျှင် ဆက်မနင်းတော့။ ညဘက် ရောက်မှ မူးမူးရူးရူးနှင့် သိုင်းကွက်နင်းပြီး ပြန်လာသည်။ လမ်းထဲ မှာတော့ အော်ဟစ် ရမ်းကားခြင်း မပြု။ လွင်မောင် အိမ်ထဲရောက်ပြီ ဆိုလျှင် သူ့မိန်းမ မခင်အေးက သောင်းကျန်းပြီ။ သူကလည်း မူးမူးနှင့် ပြန်အော်သည်။ သူတို့ လင်မယား နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ပြီ ဆိုလျှင်တော့ တော်ရုံလူပင် နားမခံနိုင် တော့ပေ။ ရုန့်ရင်းသော အဆဲအဆို မှန်သမျှကို အိမ်နီးနားချင်းများ နားဆင်ကြ ရတော့၏။ အဲဒီအဖြစ်က နေ့တိုင်းလိုလို ဆိုတော့ လမ်းထဲမှာ အဆူပူဆုံး အိမ်အဖြစ် တစ်လမ်းလုံးက တပြိုင်နက် သတ်မှတ် ထားကြ၏။
ထိုသို့ လူတန်းစား မညီမျှလှသော လမ်းကလေး အတွင်းမှာ နေသည့် ကျွန်တော်က စာရေးဆရာ ပီပီ အမြဲတမ်း အကဲခတ် နေမိ၏။ ထိုအထဲမှာ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စား တာက ဖိုးအောင်။ ဖိုးအောင်လေးက ခြောက်နှစ်သားလောက် ရှိပြီ။ သွက်လက် ချက်ခြာသော ကလေး ဖြစ်၍ ကျွန်တော်က ချစ်သည်။ စကားလည်း တတ်၏။ တစ်ခါက ကျွန်တော့်ကို မေးဖူးသည်။
“ဦးဦးက ဘာအလုပ် လုပ်တာလဲဟင်” တဲ့။
“ဦးဦးက စာရေးဆရာ ပေါ့ကွ” ဆိုတော့ သူက ထပ်မေးပြန်သည်။
“ဘာအကြောင်းတွေ ရေးတာလဲ” တဲ့။ ကျွန်တော် ကလည်း ကလေး မေးတာပဲ ဆိုပြီး “သူများတွေ ပြောပြ တာကို မှတ်ထားပြီး ဦးဦးက ပြန်ရေးတာ ပေါ့ကွ” ဟု ပြီးစလွယ်ပင် ဖြေလိုက် မိသည်။ အဲဒါကို သူက မှတ်ထားပုံရ၏။ နောက်နေ့က စပြီး ကျောင်းက ပြန်ရောက် သည်နှင့် ကျွန်တော့်အိမ်ဘက် ကူးလာကာ သူသိ ထားသော ပုံပြင်တွေ အကြောင်း ပြောကာ စာရေးခိုင်း တော့သည်။ တစ်နေ့တည်း မဟုတ်။ သူစိတ်ကူး ပေါက်တိုင်း ကျွန်တော့်ကို ပုံပြင်တွေ လာပြော ပြသည်။ ပုရွက်ဆိတ်နှင့် နှံကောင် အကြောင်းလည်း ပါ၏။ စင်ဒရဲလားနှင့် လူပုလေး များလည်း ပါ၏။ ဖိုးအောင်ကို ကြည့်ရတာ ကျွန်တော့်ကို အတော်ခင်တွယ်ပုံ ရသည်။ ကျွန်တော် ကလည်း ထိုကလေးကို သံယောဇဉ် ဖြစ်နေမိ၏။
အစ ပိုင်းက ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလို “လမင်းဝေဖာ ရေခဲမုန့်” ရောင်းသည့်ကား လာတိုင်း ဖိုးအောင် အရိုက် ခံရသည်။ ဖြစ်ပုံက ထိုကား ရေခဲမုန့် လာရောင်းတိုင်း ကလေးတွေက ထိုကားနားမှာ အုံဖွဲ့ပြီး ရေခဲမုန့် ၀ယ်စား ကြသည်။ ဖိုးအောင် ကလည်း ကလေးပီပီ စားချင်ရှာတော့ သူ့အမေကို ရေခဲမုန့် ၀ယ်ကျွေးဖို့ ပူဆာသည်။ မိဘဆိုသည် ကလည်း ကိုယ့်သားသမီး ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်း ပေးချင်ကြ သူတွေချည်းပဲ ဖြစ်၏။ သို့သော် တစ်နေ့စားဖို့ တစ်နေ့ အနိုင်နိုင် ရှာဖွေ နေရသော ဘ၀ပေး အခြေအနေ အရ ၀ယ်မကျွေးနိုင်။
ဖိုးအောင် ကလည်း မုန့်မစား ရတော့ ကလေးပီပီ ဂျီကျသည်။ ထိုအခါ သူ့အမေက ပြော၍ မရကောင်းလား ဆိုကာ ဖိုးအောင်ကို တုတ်တစ်ချောင်း ဆွဲပြီး ရိုက်တော့သည်။ ပညာတတ် လူတန်းစားဖြစ်သော မိဘ ဆိုလျှင်တော့ ကလေးကို ရိုက်ချင်မှ ရိုက်ပေလိမ့်မည်။ “အမေတို့မှာ တစ်နေ့ စားဖို့တောင် တစ်နေ့ မနည်း ရှာရတာ … သားကို ဘယ်ဝယ်ကျွေး နိုင်ပါ့မလဲ သားရယ် .. အမေတို့လည်း ၀ယ်ကျွေးချင် တာပေါ့” စသည်ဖြင့် ကလေး နားဝင်အောင် ပြောဆို ဆုံးမမည် ဖြစ်သည်။
ဖိုးအောင်၏ မိဘတွေ ကတော့ ဘ၀ပေး အခြေအနေ အရပင် ပညာမသင် ခဲ့ရတော့ သူတို့၏ ဘ၀ပေး အသိကလည်း ဆုံးမခြင်း ဆိုသည်မှာ ရိုက်နှက်သော နည်းလမ်းပင် ဖြစ်မည်ဟုသာ ထင်ကြသည်။ သို့သော် ဖိုးအောင်ကို ရိုက်နှက် ပြီးတိုင်း မခင်အေး မှာလည်း ဖိုးအောင် ထက်ပင် နာကျင် ခံစားရမည် ကတော့ သေချာ ပါသည်။
*ဒီ app လေးက အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ computer မှာ photoshop နဲ့ အလုပ်ရှုပ်စေနိုင်မယ့်*
*ပုံလေးတွေကို အလွယ်တကူ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ် ကိုယ်ပွားပုံတွေကို ဖန်တီးချင်သူ...